ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်း - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရး » ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ေနစဉ်အတွင်း မောပန်းလွယ်ခြင်း၊ မနက်ပိုင်း ပျို့အန်ခြင်း၊ သားအိမ်ခေါင်းအချွဲဆင်းခြင်းတွေ အပြင် မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်းဟာလည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတဲ့အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမကိုယ် ယားယံခြင်းဟာ ဆိုးရွားတဲ့ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ကာလသား ရောဂါလိုမျိုး နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ မဖြစ်လာစေဖို့ ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန် စစ်ဆေးကုသသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်းဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။
• အရည်လိုအပ်မှုပိုများလာခြင်း။ ။ ကိုယ်ဝန်ရဲ့ပထမသုံးလတာ ကာလမှာ ကလေးရဲ့ခန္ဓါကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရည်ဓါတ်များစွာလိုအပ်တာကြောင့် မိန်းမကိုယ်အတွင်းသားတွေ ခြောက်သွေ့လာပြီး စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်း နဲ့ ယားယံ ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။
• မိန်းမကိုယ်တဝိုက်ချွေးထွက်များခြင်း။ ။ မိန်းမကိုယ်တဝိုက် ကြားနေရာလေးတွေမှာ ချွေးစုလာတဲ့အတွက် ပူနွေးစိုစွတ်မှုကြောင့် ယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
• တချို့သော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။ ။ ရေမွှေး၊ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာ၊ ကွန်ဒုံး နဲ့ မိန်းမကိုယ်အတွင်းပိုင်းကိုဆေးကြောတဲ့ဆေးရည် စတဲ့အရာတွေမှာ မိန်းမကိုယ်တစ်ဝိုက်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အရာတွေပါလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အချိန်မှာ မိန်းမကိုယ်အရေပြားဟာပုံမှန်ထက် တုံ့ပြန်မှုပိုများလာ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေအစား ရနံ့ကင်းတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို အစား ထိုး အသုံးပြုပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မိန်းမကိုယ်ယားယံတာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
(၁) ယားယံတဲ့နေရာတဝိုက်ကို ရေအေးပတ် ကပ်ပါ။
ရေအေးပတ် ကပ်ခြင်းက ယားယံခြင်းကို ခတ္တခဏ သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။ ရေနွေးပတ်မကပ်မိပါစေနဲ့ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အရေပြားကို ပိုဆိုးသွားစေ နိုင်ပါတယ်။
(၂) နေ့စဉ်အစားအသောက်မှာ ဒိန်ချဉ် ပါပါစေ။
ပြင်ပကုသမှုတွေအပြင် ဒိန်ချဉ်သောက်သုံးမှုမှ ရရှိနိုင်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အကျိုးပြုပိုးမွှားလေးတွေက ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ pH level ကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အဆီနည်း၊ သကြားလွတ် ဒိန်ချဉ် သောက်သုံးမှုက ခန္ဓါကိုယ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်တဲ့အပြင် ခန္ဓါကိုယ်ကိုဆိုးကျိုးပေးစေနိုင်တဲ့ ပိုးမွှားပေါက်ပွားမှုကိုလည်း တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ အသုံးပြုပါ။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ရဲ့အသုံးဝင်မှုတစ်ခုကတော့ ယားယံခြင်းကို သက်သာစေပြီး ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတွေကိုသေစေနိုင် ပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ကိုရေချိုးဇလုံထဲထည့်ပြီ စိမ်ချိုးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ယားယံတဲ့နေရာကို ၁၀ မိနစ်ခန့် ခပ်ပျစ်ပျစ် ပြုလုပ်ပြီးကပ်ထားပေးခြင့်ဖြင့် ယားယံမှုကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
(၄) သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အဝတ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။
ကျဉ်းကျပ်သော သားရေ၊ ဂျင်းသား အဝတ်အစားတွေက အရေပြားယားယံမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သလို ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင် တဲ့ ဆွဲသား တွေကလည်းစိုထိုင်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ထိုကဲ့သို့အဝတ်အစားတွေကို မဝတ်ဆင်ဘဲ ပွပွချောင်ချောင်အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
(၅) ယားယံမှုကို သက်သာစေတဲ့လိမ်းဆေး အသုံးပြုပါ။
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုဘဲ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့ လိမ်းဆေးကိုအသုံးပြုပါ။ ကိုယ်ဝန်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေမပါလို့ပါ။ ဆေးအညွှန်းကိုသေချာဖတ်ပြီး ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာမသေချာရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးအကြံဉာဏ်ရယူပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မိန်းမကိုယ်ယားယံမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းများစွာ ရှိပေမယ့် ဖြေရှင်း နိုင်တဲ့ကုသမှု နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ သို့သော် တခြားဆိုးရွားတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေမဖြစ်စေဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆေးပစ္စည်းတွေအပြင် ယားယံမှုကိုသက်သာစေနိုင်တဲ့ ကလေးရောမိခင်ကိုပါ မထိခိုက်စေတဲ့ သဘာဝကုထုံးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကို သိစေလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဒီဇင်ဘာ 19, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 14, 2019
http://www.parents.com/pregnancy/my-body/aches-pains/pregnancy-vaginal-discharge-infections/. Accessed December 10, 2016.
Vaginal Itching Or Swelling During Pregnancy.
http://www.thebump.com/a/vaginal-itching-swelling-during-pregnancy. Accessed December 10, 2016.
Vaginal Itching During Pregnancy. http://www.newkidscenter.com/Vaginal-Itch-During-Pregnancy.html.